Galaxy Fold vs Huawei Mate X | Gam akporosis
Ụlọ Ignatius | | Huawei, Samsung
Ọsọ amalitela. N'ime izu gara aga, anyị ahụla mmadụ abụọ n'ime ndị nrụpụta kachasị mkpa na ọnọdụ ugbu a, Huawei na Samsung egosiputa nkwa ha na mpịachi ekwentị, ụfọdụ ngwaọrụ na ka ha na-agbada na ọnụahịa, ọ ga-abụrịrị na nke a ga-abụ ihe nkịtị n'etiti ndị ọrụ.
Ma Samsung ma Huawei enweela dị iche iche echiche nke ihe a mpịachi ama anya dị ka ma ọ bụ nwere ike ịbụ. N'oge ahụ, naanị ihe ọnụ abụọ ahụ yiri bụ na ha na-apịaji. Obere ihe. Nke a bụ isi ihe dị iche iche, gafere ọkwa aesthetics anyị na-ahụ na Fold Galaxy Samsung na Huawei Nwunye X.
1 Nkọwapụta nkọwa
2 Fold Galaxy
4 Kedu nke ka mma?
5 Ndi mpịachi smartphones nwere ọdịnihu?
Usoro njikwa Akara 9.0 achịcha na EMUI 9 Achịcha 9 Pee na Otu UI
Ihuenyo 8 Inch nwere mkpebi nke pikselụ 3120 x 1440 (sentimita 6.39 apịaji na 6.6 sentimita na-apịaji) 4.6-anụ ọhịa HD + Super AMOLED (21: 9) ngosipụta dị n'ime na 7.3-inch QXGA + Dynamic AMOLED (4.2: 3) Infinity Flex display
Nhazi Kirin 980 na Balong 5000 dị ka modem Exynos 9820 / Snapdragon 855
GPU Ogwe aka Mali-G76 MP10 -
Nchekwa n'ime 512 GB 512 GB nke UFS 3.0
Igwefoto na-aga n'ihu 40 MP n'obosara obosara + 16 MP ultra wide angle + 8 MP telephoto 16 MP f / 2.2 ultra-wide angle 12 MP Dual Pixel wide-angle na agbanwe oghere f / 1.5-f / 2.4 na ngwa anya ihe oyiyi stabilizer + 12 MP telephoto lens nwere ntinye anya abụọ na-amụbawanye na f / 2.2 aperture
Igwe n'ihu Enweghị igwefoto dị n'ihu ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya na ọnọdụ mbadamba 10 MP f / 2.2. + 8 megapixel f / 1.9 omimi ihe omimi na 10 MP f / 2.2 na mkpuchi.
Njikọ 5G Dual Sim Bluetooth 5.0 WiFi 802.11a / b / g / n / ac USB-C Bluetooth 5.0 A-GPS GLONASS WiFi 802.11 ac USB-C 3.1
Atụmatụ ndị ọzọ NFC mkpisiaka ihe mmetụta n'akụkụ Akụkụ mkpisiaka agụ compass gyroscope NFC
Batrị 4.500 mAh na 55W Huawei SuperCharge 4.380 mAh
Akụkụ Ọkpụrụkpụ 11mm apịaji (5.49mm emeghe) -
Ibu ibu - 200 grams
Ahịa Euro 2299 ($ 2.600) 1980 dollar
Samsung nzo na ama ama na a Ihuenyo mpụga nke 4,6 iji bulie oku ọ bụla, chọọ ngwa ngwa ma ọ bụ see foto. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iri ọdịnaya, ma ọ bụ rụọ ihe karịrị otu ọrụ n'otu oge, anyị nwere ike imeghe ngwaọrụ ma si otú a jiri ọrụ nke Galaxy Fold na-enye anyị.
N'oge ngosi nke Samsung Fold, ụlọ ọrụ Korea kwuru akụkọ ọ bụla bara uru nke mbido ekwentị mbụ ga-enye anyị mgbe ọ na-akụ ahịa ahụ n'April nke afọ a, yabụ anyị nwere ike ịmata ihe bụ mmalite adopters a ga-eme ya: 12 GB Ram, nchekwa 512 GB, Snapdragon 855 / Eynos 9820, igwefoto 6Nkọwapụta nke ga-enyere ngwaọrụ aka ịmegharị n'enweghị nsogbu.
Ọzọkwa, ekele na mmekorita nke sitere na Google Na mmepe nke ngwaọrụ ndị a, akwa nhazi nke Galaxy Fold na-arụ ọrụ zuru oke dịka anyị nwere ike ịhụ na ngosipụta nke ụlọ ọrụ ahụ mere.
Pricegwọ nke Galaxy Fold bụ $ 1.980. Maka ugbu a, anyị ga-echere iji hụ ihe ntụgharị obi ụtọ na euro ga-abụ.
Firmlọ ọrụ Asia na-enye anyị ama mpịachi ama, yabụ na anyị anaghị ahụ ihuenyo ọ bụla na mpụga nke pere mpe nke anyị nwere ike iji kpọọ ma ọ bụ kpọtụrụ ngwa ngwa. Isi uru nke usoro a na-enye anyị bụ na anyị nwere ike dKporie ihu na ihuenyo ihu nwere ihe kariri sentimita isii nke mkpebi, ihuenyo buru oke ibu nke na ọ dịghị enwe uche dị ukwuu iji kpughee ya iji rie ọdịnaya na nnukwu ihuenyo.
Firmlọ ọrụ Asia bụ Huawei ahọrọla ịnye otu ìgwè ese foto ahụ n'azụ / n'ihu ngwaọrụ ahụ. Nke ahụ bụ, ha bụ otu eserese ahụ ma ama amaa ama ama ama. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkpọ oku vidiyo, anyị ga-eme ya na smartphone apịachi. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịse foto, anyị ga-agbanwe ọnụ ya ma jiri azụ ihuenyo ahụ mee ihe.
Pricegwọ nke Huawei X bụ $ 2.600, Euro 2.299 na mgbanwe (ọnụahịa gọọmentị). Ọ bụ ezie na Samsung gbara mbọ ịwepụta ụbọchị a ga-ewepụta n'ahịa ahụ, Huawei kwuru na ọ ga-eme ya n'afọ a niile, na-ekwughi oge ọ bụla n'afọ ọ ga-eme, na-egosi na enwere ike ịgbanwe ụfọdụ n'ụzọ.
N'echiche a, ha abụọ bụ nnukwu ọnụ. Ha abụọ na-enye anyị echiche abụọ dị iche iche. Mgbe Huawei X bụ ihe mara mma Site na ịnye anyị nnukwu ihuenyo otu na-enweghị ọkwa nke enwere ike apịaji gaa n'èzí, Samsung na-echekwa n'ime ihuenyo ahụ, na-etinye ihuenyo mpụga iji nwee ike ịmekọrịta ngwa ngwa na ekwentị.
Ọrụ Samsung na-enye anyị ohere jiri ekwentị a mee ihe na-ese foto, ihe nke Huawei Mate X na-amanye anyị ịtụgharị ya oge ọ bụla, ihe ize ndụ ebe ọ bụ na n'ikpeazụ anyị nwere ike ịmịcha ma kwụsị na ala. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka oku vidiyo, enwere ike ịrụ ọrụ a ma ọ bụrụ na anyị nwere Huawei Mate X apịaji, n'ihi ọnọdụ nke ese foto, ihe anyị nwere ike ime n'ụzọ zuru oke na Galaxy Fold.
Ndi mpịachi smartphones nwere ọdịnihu?
Ee na mba. Ọ bụrụ na ị nwere mbadamba nkume, yikarịrị, ọ bụrụ na ịnweghị oge echere WhatsApp, n'ụlọ gị na-eji mbadamba, ma ị ga-eme nyocha Internetntanetị, rie ọdịnaya, zaghachi ozi ịntanetị gị, jụọ netwọk mmekọrịta ...
Oldkpakọba smartphones ugbu a nwere ha niche na ahịa na ọ bụ kpomkwem bụghị onye ọrụ na-emekarị na-eji ha ekwentị izipu ma ọ bụ inweta ozi, igosi ọchụchọ na na. Ndị ọrụ a manyere iji ụbọchị iri na ụma ma ọ bụ laptọọpụ gaa ụbọchị niile ebe a ka ọ bụrụ na ha nwere mkpa iji ya, bụ ndị nwere ike nweta ọtụtụ ụdị ụdị ngwaọrụ adị ka ha na-enye ihe niile-na-otu.
N'ihi ụdị ngwaọrụ ndị a, ọ dịghị mkpa ka ị kwụnye mbadamba ụrọ ụbọchị niile, ọ bụrụ na ị nwere mkpa iji ya, nke na-enye anyị ọtụtụ ntụgharị na nkasi obi kwa ụbọchị. Samsung na Huawei ewepụtala echiche abụọ dị iche na otu usoro, dịka o mere afọ ole na ole gara aga na VHS na Beta. Naanị otu n'ime ha ga-abụ onye na-eburu pusi gaa na mmiri ma nwee mmeri iji bụrụ ihe nlereanya nke ndị nrụpụta ndị ọzọ ga-agbaso.
N'oge a, ọ kabeghị aka ịmara ihe omume a ga-abụ, ebe ọ bụ na ọ nweghị n'ime ọdụ ndị a erutela ahịa ahụ, n'agbanyeghị na ha ga-eme ya n'oge na-adịghị anya. Ihe niile ga - adabere na ihe onye ọrụ na - achọ na ihe kachasị adịrị ya mma. N'ihe banyere nke m kpọtụrụ aha dịka ọmụmaatụ, n'etiti usoro VHS na Beta, ndị nke a na-enye vidiyo dị elu, mana n'ikpeazụ ọ bụ usoro VHS nke nọrọ n'azụ wee bụrụ eze nke ụlọ.
Ọ ka bụ ngwa ngwa maka mpịachi ekwentị ka ọ bụrụ ngwaọrụ nkịtị maka ndị ọrụ, ọ bụrụ na ha emechaa, tumadi n'ihi ọnụahịa ahụ, ihe karịrị puku dollar abụọ na nke abụọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Galaxy Fold vs Huawei Mate X: echiche abụọ dị iche maka otu nzube ahụ
Samsung Galaxy A30, etiti ọhụụ ọhụụ nke South Korea bụ ọrụ gọọmentị